भारत, चीन वा अमेरिका : गठबन्धनमा लाग्दा कसैले पनि हामीलाई बचाउन सक्दैन | Ratopati
बहसमा परराष्ट्र नीति
भारतलाई काउन्टर दिँदै चीनसँग मात्रै सम्बन्ध बढाउँदा नेपाललाई फाइदा हुँदैन
personडा. बाबुराम भट्टराई exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २२, २०७५ chat_bubble_outline0
शान्ति र समृद्धिका लागि नेपालको परराष्ट्रनीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्दा दीर्घकालीन सापेक्ष अर्थ हो । हाम्रो मात्र हातमा हुने भए त गर्न सकिन्छ तर संसारमा यतिखेर २०० भन्दा बढी राष्ट्रहरू छन् । तीमध्ये हामी एक हौँ ।
विश्वमा विभिन्न थरीका शक्तिकेन्द्रहरू छन् । तिनीहरूको गति र उनीहरू बीचको द्वन्द्वले निर्माण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनबीचको हाम्रो राजनीतिले त्यसलाई जतिसुकै चाहेर पनि बदल्न सक्दैनौँ । यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले नीति निर्माण गर्ने हौँ ।
विश्व शक्ति सन्तुलनको स्थिति, अझ मुख्यतः हाम्रा छिमेकी देशहरूको स्थिति के छ ? हाम्रो राजनीतिले के निर्देशित गर्छ भन्ने आधारमै सायद हामीले नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिकै विस्तारित रूप हो । त्यसरी हेर्दा कुनै बेला नेपाल नाम गरेको राज्य हामीले निर्माण गरेका छौँ । त्यतिबेला भौगोलिक एकीकरण वा भौगोलिक राज्य निर्माण गर्ने कालखण्ड थियो । हामीले भूगोल विस्तार गर्ने, भूगोलको रक्षा गर्ने कुरामै हामीले ध्यान दिनु पर्थ्यो । र, हाम्रो आन्तरिक नीति र परराष्ट्र नीति पनि त्यसमै केन्द्रित हुन्थ्यो । मूलतः सुगौली सन्धिसम्मको कालखण्डसम्म भूगोलको रक्षा र भूगोल निर्माणको कालखण्ड रह्यो । त्यसपछिको कालखण्ड देशभित्र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, लोकतान्त्रीकरण गर्ने र विभिन्न खालका जातीय क्षेत्रीय विभेदमा परेकाहरूले सङ्घीयताअन्र्तगत आफ्नो पहिचान र राज्यसहितको राज्य तथा स्वायत्तता प्राप्त गर्ने अभियान चल्यो । त्यसपछि यता ७०, ८० वर्षको कालखण्ड लोकतान्त्रीकरणको कालखण्ड थियो ।
त्यो कालखण्ड शीतयुद्धको कालखण्ड पनि भयो । पुँजीवाद र साम्यवादबीचको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा रह्यो । विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभाव क्षेत्र विस्तारको कालखण्ड पनि रह्यो । त्यतिबेला लोकतान्त्रिक अभियानलाई बढाउने ढङ्गले हामीभन्दा अघिका शासकहरू वा अहिलेसम्मका शासकहरूले त्यसलाई ध्यान दिएर नीति निर्माण गर्ने कोसिस गर्नुभयो । त्यसैले म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आरोप प्रत्यारोप नगरौँ । किन भने हाम्रो चेतना पनि समयअनुकूल विकास हुन्छ । सय वर्ष पहिले यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा काल्पनिक कुरा मात्रै हुन्छ । त्यतिबेलाको परिवेशमा के गर्नुपर्थ्यो वा के गरे भनेर हेर्ने हो । र, अहिलेको कालखण्डमा हामीले के गर्ने भनेर हेर्ने हो ।
अब बल्ल समृद्धि राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको छ । विश्व र छिमेकको पनि त्यो एजेन्डा बनेको छ । शान्ति स्वतः समृद्धिसँग जोडिएको हुँदा हामी सबैलाई आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शान्ति र समृद्धिका निमित्त परराष्ट्र नीति भन्ने नयाँ एजेन्डा यो कालखण्डमा अब आउँदै छ । हिजो पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापाका पालामा थिएन र महेन्द्रका पालामा थिए । हाम्रो पालामा शान्ति र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ ढङ्गको परराष्ट्र नीति बनाउने भन्नेबेला अब आएको छ । त्यसकारण अब के गर्ने त्यता तर्फ जाँऊ ।
कुनै एक गठबन्धनमा लागौँ भने हामी कुनमा लाग्ने ? भारतको गठबन्धनमा लागौँ अमेरिका र चीनको टक्कर पर्नेवाला छ, भारतले मात्रै बचाउन सक्दैन । चीनको गठबन्धनमा लागौँ, सिधै अमेरिका र भारतसँग टक्राउनुपर्छ । अमेरिकासँग लागौँ भने दुई छिमेकी छाडेर त्यता लाग्न मिल्दैन । त्यसकारण गठबन्धनमा लाग्ने बाटो हाम्रो निम्ति उपयुक्त छैन । तीन शक्तिराष्ट्रसँग अलग अलग सम्बन्ध राखेर त्रिपक्षीय सन्तुलन राखौँ भने सकिन्छ केही समय । तर यसका लागि अहिले हाम्रो तागत पुग्दैन । व्यावहारिक र भूराजनीतिक हिसाबले हामी भारततिरै ढल्किएका छाँै, यो सबैलाई थाहा छ ।
सानो देश भन्दिनँ, मध्यमस्तरको देश हो नेपाल । जनसङ्ख्याको हिसाबले ४९औँ र क्षेत्रफलको हिसाबले ९६औँ ठूलोमा छाँै । त्यसकारण हामी मध्यमस्तरको देश हौँ । भारत र चीनको बीचमा भएको हँुदा त्यो सानो भन्ने ‘सिन्ड्रोम’ले कहिले काहीँ गाँज्छ । भारत र चीनको विशिष्ट भूराजनीति र उदयीमान शक्तिका बीचमा हुनुको नाताले ल्याउने डानामिक्स के हुन्छ, भारत र चीनको डाइनामिक्स कसरी जान्छ, एउटा यो पाटो त्यो हो । अर्को, अमेरिका जतिसुकै खस्कँदो छ, समस्यामा छ भने पनि त्यो ठूलो बाघ हो । बाघ दुब्लाउँदैमा विरालो बन्दैन, बरु दुब्लो बाघ हुन्छ । त्यसकारण अमेरिकाको २१औँ शताब्दिभरि त्यसको एउटा प्रभाव रहिराख्छ । त्यसैगरी रुसको पनि रहिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अरू कतिपय देशहरू पनि उदय हुन सक्छन् ।
तर मूलतः भारत, चीन, पश्चिमा शक्ति र अमेरिकी शक्तिबीचको सन्तुलन, अझ त्यसमा पनि अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा गरी अघिबढ्दाको डाइनामिक्सले पनि प्रभाव राख्छ । साथै हामी भारतसँग भूराजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र ऐतिहासिक ढङ्गले बढी जोडिएको हुँदा भारतसँगको सम्बन्धले पनि भूमिका खेल्छ । यी तीन थरीबीचको डाइनामिक्सले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा असर गर्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा हामीले शान्ति र समृद्धिका लागि के गर्नेभन्दा मैले छोटो बुझेको, न्यून शक्ति भएका देशहरूले त्यसका निम्ति यस्ता शक्तिकेन्द्रहरूमध्ये एउटासँग गठबन्धन गरेर विकास, शान्ति र समृद्धि गर्ने एउटा बाटो छ ।
जस्तो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान सिधै अमेरिकी छाताभित्र बस्यो र विकास गर्यो । कोरिया, इजरायलले अमेरिकी छाताभित्र बसेर विकास गर्यो । सिङ्गापुरले पनि करिब करिब पश्चिमा शक्तिको छाताभित्र बसेर विकास गर्यो । एउटा बाटो यो हो ।
अर्को बाटो, मध्यमस्तर स्तरको तागत र शक्ति छ भने सबैसँग अलग अलग डिल, बार्गेनिङ गरेर आफ्नो राजनीतिक साधन र परिचालन गर्ने, त्यो दोस्रो बाटो हो । यसका लागि अलि तागत चाहिन्छ । मध्यमस्तरको शक्ति अथवा उच्च स्तरको शक्ति जसले सबैसँग सन्तुलन कायम राख्न सक्छ र आफ्नो राष्ट्रको विकास गर्नसक्छ ।
तेस्रो बाटो भनेको पूरै शान्तिको बाटो हो । कसैसँग झगडा नगर्ने, विश्वशान्तिको प्रवद्र्धन गर्ने, क्षेत्रीय शान्तिको वकालत गर्ने र देशभित्र पनि शान्तिको वकालत गर्ने । कसैसँग झगडा नगरी हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षा गरेर समृद्धिको बाटोमा लाग्ने सायद तेस्रो बाटो हुन्छ । मैले बुझेअनुसार यो बाटो स्विजरल्यान्ड, लक्जेम्बर्गले लिएको छ । केही हदसम्म स्पेनले पनि दुईवटै विश्वयुद्धमा कसैपट्टि नलागेर स्वतन्त्र बसेर आफ्नो नीति सञ्चालन गरेको छ ।
यी तीन बाटोमा हामीले कुन बाटो उचित छ भनेर हेर्नुपर्छ । विचार गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ आउँछ ।
कुनै एक गठबन्धनमा लागौँ भने हामी कुनमा लाग्ने ? भारतको गठबन्धनमा लागौँ अमेरिका र चीनको टक्कर पर्नेवाला छ, भारतले मात्रै बचाउन सक्दैन । चीनको गठबन्धनमा लागौँ, सिधै अमेरिका र भारतसँग टक्राउनुपर्छ । अमेरिकासँग लागौँ भने दुई छिमेकी छाडेर त्यता लाग्न मिल्दैन । त्यसकारण गठबन्धनमा लाग्ने बाटो हाम्रो निम्ति उपयुक्त छैन ।
तीन शक्तिराष्ट्रसँग अलग अलग सम्बन्ध राखेर त्रिपक्षीय सन्तुलन राखौँ भने सकिन्छ केही समय । तर यसका लागि अहिले हाम्रो तागत पुग्दैन । व्यावहारिक र भूराजनीतिक हिसाबले हामी भारततिरै ढल्किएका छाँै, यो सबैलाई थाहा छ ।
नेहरूले प्रयोग गरेको बोर्डर र फ्रन्टियरमा ख्याल गर्नुपर्छ । यसबारेमा विज्ञहरूलाई थाहा होला । नेहरूले फ्रन्टियर भनेका रहेछन् तर त्यसलाई बोर्डर ठानेर नेपाललाई भारतले खानै लाग्यो भनेर उफ्रियौँ हामी । भारतका विरुद्धमा जुलुस निकाल्ने र नेपाल बन्द गर्नेमध्येमा म पनि हो । तर पछि अध्ययन गर्दै जाँदा बोर्डर र फ्रन्टियरमा फरक पर्ने रहेछ । भूराजनीतिक हिसाबले हेर्दा दक्षिण एसियाली देशहरूका निम्ति हिमाल जुन फ्रन्टियर हो, ऐतिहासिक रूपमै बनेको कारणले त्यो स्थिति चाहिँ रहेछ । भलै हिमालपारि (गणेश हिमालदेखि पश्चिम लाग्दा उत्तरपट्टिको भाग) एक तिहाई भूगोल त छ । तर जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा ८०, ९० प्रतिशत दक्षिणतर्फ ढल्केको छ । भारतसँग परनिर्भरता र उत्पीडन पनि छ । व्यापार घाटा छ । नाकाबन्दीबाट पटक पटक हैरान पनि भएका छौँ । मेरै जीवनकालमा तीनवटा नाकाबन्दी पनि झेलिसकेका छौँ । एकातर्फ भारतसँग यो हैरानी छ । अर्कोतर्फ व्यावहारिक रूपमा उसँग सम्बन्ध नबनाएसम्म, डिल नगरेसम्म बाँच्न सकिन्न, अवस्था यस्तो छ । त्यसकारण भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ ।
अर्को, भारतसँगको सम्बन्धलाई ठीक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर उसको मनोविज्ञान चीन ठूलो शक्तिका रूपमा आउँदै गर्दा भारत अमेरिकासँग मिलेर यतापट्टिको प्रवेश रोक्ने जुन नीति लिइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामी सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हुँदा त्यसमा चासो राखिँदैन भन्न त सकिन्छ । तर व्यवहारमा उसको चासोको अलिकति ख्याल नगरिदिने हो भने यही प्रकारको खुला सिमाना, व्यापार घाटा र अन्य विविध खालका सम्बन्धहरू छन्, त्यसलाई प्रयोग गरेर भारतले बसिखान दिँदैन । यो बुझिएकै कुरा हो । त्यसकारण यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर राष्ट्रिय समझदारी बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो राइट र लेफ्टको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन । हिजो एउटा कालखण्डमा म आफै लडेको हो । हिजोको माओवादी सुरुङ्युद्ध भनेर लडेकै हो ।
तर अब परिस्थितिअनुसार हिँड्नु पर्यो । त्यसकारण त्रिपक्षीय सम्बन्ध मिलाउँदा भातरसँग ठिक ढङ्गले डिल गर्ने नीति नपनाएसम्म अनि चीन र अमेरिकासँग त्यसपछि कुरा आउँछ । अहिले चीन विश्वमा ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । चीन केही पनि होइन, त्यसलाई आउँन दिन हुँदैन । त्योसँग सहजता धेरै खोजेपछि बरबाद हुन्छ भन्ने पनि उपयुक्त हुँदैन । चीन ठूलो शक्तिका रूपमा आउँदै छ । तपाईं हामीले चाहे पनि नचाहे पनि त्यो बीआरआईमार्फत युरोप तिर गैसक्यो, दक्षिण एसिया प्रवेश गर्न खोजेको छ । हामी मात्रै बाटो हैन । यदि हामीले दिएनौँ भने पनि बङ्गलादेश बर्मातिरबाट यसै पनि पसिसकेको छ, पस्छ । पाकिस्तानतिर पनि पसिसकेको छ । हामीले मात्रै छेकेर पनि छेकिनेवाला छैन ।
त्यसकारण चीनसँग पनि त्यो प्रकारको सम्बन्ध हामीले नबनाई हुँदैन । त्यो फेरि भारतको काउन्टरमा होइन । हाम्रो आफ्नै फाइदाको निम्ति पनि तयो सम्बन्ध विकास गर्नु जरुरी छ । भारतसँगको एकपक्षीय परनिर्भरता हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसलाई सन्तुलित गर्न पनि चीनसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । चीनसँग भएका निकासहरू मध्येमा, नेपालको अहिलेको प्राथमिकतामा रेल भन्दिन । हुन त रेल ल्याउनुपर्छ भन्नेमान्छे म हो । पुल बनाएर तीन देशलाई जोड्नुपर्छ भन्ने पनि मै हुँ, प्रधानमन्त्री हुँदा । ओन्जिया वाओ आउँदा मैले औपचारिक प्रस्ताव राखेको पनि थिएँ । त्यतिबेला राम्रो भनेर सबैले प्रशंसा पनि गर्नुभएको हो । तर अहिले रेल ल्याउन समय लाग्छ, खर्चिलो पनि छ । रेल ल्याउनु त पर्छ । त्योभन्दा पहिला बुद्धिनारायणजीले भन्नु पनि भयो, कोशी, गण्डकी र कर्णालीका तीन करिडोर राम्रोसँग खोलौँ र बन्द व्यापारको निकास दिऊँ ।
अहिले जुन राष्ट्रिय राज्यहरू छन्, यी राज्यहरू विस्तारै वल्ड फेडरेसनतिर जान्छन् । हामी मध्यम देश हुनुको नाताले पनि शान्तिको प्रवद्र्धन किन नगर्ने ? प्रसिद्ध सामाजिक शास्त्री रबडी कापलानले भन्छन, ‘दुईवटा ठूला प्रतिस्पर्धीहरू बीचमा भएको एउटा सानो मुलुकले कि त आक्रामक नीति अपनाउनुपर्छ कि त अत्यन्तै शान्तिवादी नीति अपनाउनुपर्छ ।’ आक्रामक नीति हामी अपनाउने सक्दैनौँ । हाम्रो तागतले दिँदैन ।
चीनको क्यापिटल सप्र्लस इकोनोमी छ । उसले पुँजी निर्यात गरिरहेको छ, हामीलाई पनि त्यसको अभाव छ भने त्यसलाई हामी किन नलिने ? चिनियाँ लगानी किन नल्याउने ? त्यस अर्थमा दोस्रो चीनसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । र, अमेरिकासँग पनि हामीले राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । पछिल्लो चरणमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर उसले चासो देखाएको पनि छ । उसको सामरिक स्वार्थ हो, त्यो हामीले बुझेका छाँै । इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत आउन निमन्त्रणा जस्तो गरेको छ । त्यो त उसको ग्रान्ड स्ट्राटेजीअनुसार चीनलाई एक्ल्याउने अन्तर्गतकै कुरा हो । त्यो उसको कुरा हो । तर हामीले पनि त्यसबाट लाभ लिने कोसिस गर्नुपर्छ ।
हामी कमसेकम एउटा विश्व स्टाटस राडरमा त आयौँ । त्यो लाभ हामी किन नलिने ? खाली भारत र चीनको बीचमा च्यापियाँै भन्ने मानसिकताले हामी किन बस्ने ? तेस्रो ग्राहक हो भने पनि एउटा व्यापारीलाई दुईवटा ग्राहकसँग मात्रै भन्दा तेस्रो ग्राहक हुँदा बार्गेनिङ राम्रोसँग गर्नु हुन्छ । त्यसकारण हामीले अमेरिकासँग पनि अनावश्यक ढङ्गले दूरी बढाउन आवश्यक छैन । त्यसैले तीनवटा शक्तिसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । तर तीनवटासँग बराबरको सम्बन्ध कायम गर्छु भनेर त्यो व्यावहारिक र सम्भव हँुदैन । बढी डिल हामीले भारतसँग गर्नुपर्छ । त्यसपछि चीनसँग गर्नुपर्छ । तेस्रो, हामीले अमेरिकासँग गर्नुपर्छ, त्यसको सन्तुलन मिलाउन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो ।
यो तत्काल गर्दैजाने कुरा हो । तर अन्ततः दीर्घकालीन बाटो भनेको शान्तिवादकै बाटो हो । सोचौँ हामी सबैले ।
किनकि शीतयुद्धको पनि अन्तय भएको छ । हिजोको जस्तो वैचारिक कित्ताबन्दी पनि त्यति धेरै छैन । जसरी अहिले पुँजी र प्रविधिको पछिल्लो डिजिटल प्रविधिको प्रवेशले इन्फरमेसनकोे फ्लो, क्यापिटलको फ्लो, ह्युमन रिसोर्सको फ्लोको अन्तर्राष्ट्रिय रूप भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले चाहेर पनि कुनै एउटा देशलाई सीमाभित्र बाँध्न सम्भव छैन । तपाईंहरू कोही आफ्नो छोराछोरी विदेशमा नभएको हुनुहुन्छ ? मेरो विचारमा हुनुहुन्न । हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई त रोक्न सकेका छैनौँ भने अबको विश्वमा हामी अन्तरसम्मलित भएर नै जानु पर्दछ । यो दिशातिर विश्व जाँदैछ ।
अहिले जुन राष्ट्रिय राज्यहरू छन्, यी राज्यहरू विस्तारै वल्ड फेडरेसनतिर जान्छन् । हामी मध्यम देश हुनुको नाताले पनि शान्तिको प्रवद्र्धन किन नगर्ने ? प्रसिद्ध सामाजिक शास्त्री रबडी कापलानले भन्छन, ‘दुईवटा ठूला प्रतिस्पर्धीहरू बीचमा भएको एउटा सानो मुलुकले कि त आक्रामक नीति अपनाउनुपर्छ कि त अत्यन्तै शान्तिवादी नीति अपनाउनुपर्छ ।’ आक्रामक नीति हामी अपनाउने सक्दैनौँ । हाम्रो तागतले दिँदैन । त्यसकारण शान्तिवादी नीति किन नलिने ? त्यो गिड्गिडाएको शान्ति त होइन, बोल्ने शान्ति । राजा वीरेन्द्रले हिजो आफ्नो कालखण्डमा सत्ता स्वार्थका निम्ति वा त्यातिबेलाको शीतयुद्धकालीनरूपमा शान्तिक्षेत्र भने । त्यतिबेला हामीले पनि विरोध गर्यौँ । नीतिगतरूपमा खराब वा सैद्धान्तिक रूपमा तयो बेठिक त थिएन । तर लोकतन्त्रै नभएको देशमा शान्तिभन्दा त्यसले लोकतन्त्रलाई रोक्न सक्थ्यो । त्यो व्यावहारिक थिएन । त्यसैले हामीले त्यसलाई माने नै । तर अब बेला आयो । अब नयाँ ढङ्गले हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लानुपर्छ । विश्वमा नै एउटा शान्ति, निशस्त्रीकरण, युद्धको विरोधको पैरवी गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सबलीकरण गरेर त्यसलाई अझ डेमेक्रेटाइज गर्ने । र, अन्ततः विश्व फेडरेसनको अवधारणा अगाडि सारेर नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने भनेर जानुपर्छ । हामी कसैसँग दुस्मनी गर्दैनौँ । कसैको अहित गर्दैनौँ । सबैसँग मित्रता लिएर, सबैको पुँजी, प्रविधि र मानवस्रोत ल्याएर हाम्रो देशको विकास गर्छौं, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छौं भनेर जानु नै नेपालका निम्ति उपयुक्त दीर्घकालीन रणनीति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
आगामी दिनहरूमा यी विषयहरू राष्ट्रिय बहसको विषय बनोस् । कम्तीमा परराष्ट्रनीतिको विषयमा अब हामीले सोच्ने बेला भयो । हिजो हामीले चाहँदा पनि लोकतन्त्र थिएन, लोकतान्त्रिक संस्कार बनिसकेको थिएन । शीतयुद्ध र पुँजीवादका हामीले नक्कल गरेका अवधारणालाई हामीले नेपालमा लागू गर्न पनि सकिरहेका थिएनौँ । तर अब हामी परिपक्व हुँदै गएका छौँ । विश्व पनि अर्कै ठाउँमा गएको छ । त्यसैले कमसेकम परराष्ट्रनीति, विकासका बारेमा हामीले साझा नीति बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।
(सार्वजनिक नीति तथा रणनीतिक अध्ययन केन्द्र र रातोपाटी डट कमको सहकार्यमा ‘शान्ति र समृद्धिका लागि नेपालको दीर्घकालीन परराष्ट्र नीति’ शीर्षकको अन्तक्र्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)
भूकम्प सुरक्षा दिवसः रातोपाटी विशेष सामग्रीहरु
मधेस आन्दोलनको १२ वर्ष : यसरी साँघुरियो मधेस मुद्दा